ko htike's prosaic collection: ၂၀၀၈ တော်လှန်ရေးကာလ ရန် .. ငါ .. ပြတ်ကြစို့ (Burmese people in Singapore who support cruel Burmese Junta)
၂၀၀၈ တော်လှန်ရေးကာလ ရန် .. ငါ .. ပြတ်ကြစို့ (Burmese people in Singapore who support cruel Burmese Junta)
(I have updated some pictures with name.)
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး မတိုင်မီ ကာလများတွင် ကိုယ့်အလုပ်လုပ်ပြီး ကိုယ့်စီးပွားကိုယ်ရှာစားကာ နအဖဘက်နှင့် အတိုက်အခံ ဘက်ဆိုပြီး ဘက် (၂) ကို ဘယ်ဘက်မှ မလိုက်သော မြန်မာလူမျိုးများ ရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့အတွက်လည်း ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများက နားလည်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ မကင်းရာ၊ မကင်းကြောင်း နှစ်ဘက်လုံးကို ဆက်ဆံနေရကြောင်း လက်ခံပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
သို့သော် ယခု ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး အပြီး ကာလသည် ထိုသို့ နေထိုင်ရန် မသင့်တော်တော့သော ကာလဖြစ်သွားပါသည်။ ရန် .. ငါ .. ပြတ်အောင် ဘက်တဖက်ကို ရွေးချယ်ရတော့ပါမည်။ မည်သူမှ နှိုးဆော်စရာမလိုပဲ မြန်မာ လူမျိ်ုးတိုင်း ကိုယ့်အသိစိတ်ဓါတ်နှင့် ဘက် ရွေးရတော့ပါမည်။ ပြောမှသိ၊ ထိမှ နာ ဆိုသော စိတ်ဓါတ်ရှိသည့် လူမျိုးအဖြစ်ကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးကို ထည့်မတွက်စေချင်ပါ။
၂၀၀၇ စက်တင်လတွင် ကျွန်တော်တို့ ကိုးကွယ်သော ဘာသာရေးကို စော်ကားခံခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ရိုသေရသော သံဃာတွေ သွေးမြေကျခဲ့ရပါသည်။ သံဃာတွေကို စစ်ကြောရေးမှာ ရိုသေရကောင်းမှန်းမသိ ရိုက်နှက်ဆဲဆို၊ စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ ထောင်သွင်း အကျဉ်းချခဲ့ပါသည်။ ရဲဘက် စခန်းသို့ပို့ပြီး နှိပ်စက်ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းသား ပြည်သူများကို သတ်ခဲ့ပါသည်။ မျက်မြင် ကိုယ်တွေ့ မြင်ခဲ့ရပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကြောင့် ထိုသို့ လုပ်ရဲသော ရက်စက်သော နအဖကို ပြတ်ပြတ်သားသား တိုက်ခိုက်ရမည်မှာ မြန်မာလူမျိုးတိုင်း၏ တာဝန်ဖြစ်လာပါတော့သည်။ အထူးသဖြင့် ပြည်ပသို့ ရောက်နေသော မြန်မာလူမျိုးတိုင်း နအဖကို ပြတ်ပြတ်သားသား ရင်ဆိုင်ရပါမည်။ သာသနာဖျက် လူယုတ်မာများနှင့် ကိုယ့်တကိုယ်စာ ပေါင်းစားမလား၊ ဘာသာ သာသနာနှင့် ပြည်သူလူဘက်ကို လိုက်မလားဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ကြရပါတော့မည်။ မည်သည့် ဘက် ကို ရွေးကြမလဲ။
အထက်ပါ အချက်များကို တွေးကြည့်သူတိုင်း စင်္ကာပူတွင် နအဖ သံရုံးမှ လုပ်ကိုင်သော လွတ်လပ်ရေးနေ့ ပွဲကို ပါဝင် ကပြဖို့ သင့်၊ မသင့်၊ ငွေကြေးစိုက်ထုတ် လုပ်ကိုင်ပေးရန် သင့်၊ မသင့် ဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးတိုင်း သိကြပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ဘလော့များတွင်လည်း ထိုပွဲကို မလုပ်ရန် မေတ္တာရပ်ခံ ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ၀၂.၀၁.၂၀၀၈ တွင် နအဖ သံရုံးမှ ကျင်းပသည့် ပွဲကို သံဃာတော်များ ကျခဲ့သည့် သွေးနှင့် ခြေဆေးပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကပြ အသုံးတော် ခံခဲ့ကြပါသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကလည်း ဓါတ်ပုံရိုက်ကာ အဆိုပါ လူများကို သာသနာ ဖျက်များနှင့်အတူ လူမိုက်များအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါသည်။ စင်္ကာပူနေ မြန်မာများ အဆိုပါ လူများကို မြန်မာ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ဖယ်ကျဉ်ခြင်းဖြင့် ပထမဦးဆုံး မျိုးချစ်စိတ်မရှိသူများကို ဒါဏ်ခတ်အရေးယူပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။
ပွဲ အစီအစဉ်ကို ဖတ်ကြည့်နိုင်ရန် တင်ပေးလိုက်ပါသည်။
ပွဲစဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သူများကို တွေ့နိုင်ပါသည်။(ပုံကြီး ကြည့်လိုလျှင် ပုံပေါ်တွင် နှိပ်၍ ကြည့်နိုင်ပါသည်။)
ပုံတွင် ပါဝင်သူများ၏ နာမည်များကို နောက်နေ့တွင် အသေးစိပ် ဖေါ်ပြပါမည်။
However, the September Revolution has changed everything. It has beenamake or break time. Black or white, right or wrong, East or West. The time has come for everyone who is connected to Burma, to makeaclear choice. Which side do you belong to? Pro-Junta or Pro-Democracy?
Everyone Burmese resident in Singapore, had been notified of the pro-junta's Independence Day celebration in the Mandarin Hotel on2January. Exiled pro-democracy and anti-junta bloggers had put out appeals to boycott the event and most people from Burma managed to avoid it. However, the evidence of these photos proves that there are many thick-skinned shameless and selfish people who expose themselves as most disloyal to their own country and their own race and people, and in favour of the mass murderers, military junta robbers of the country's resources . These disloyal maggots, who are feeding on the putrescent junta are all recorded in these photos. Their dishonourable names will be published soon.
စင်ကာပူက ဆိတ်လစိတွေကို ဓာတ်ပုံနဲ့တကွတင်ပေးတဲ့အတွက်..။
Thanksalot for the pictures of those shameless people. We should all show them the consequences of letting our people down!!!
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ပုံရိပ်မပါပဲ လွတ်လပ်ရေးအောင်ပွဲ ဆိုတဲ့နေ့ကို သူတို့မို့လို့ အရှက်မရှိ ဆင်နွှဲရဲတယ်ဗျာ ...
3 January 2008 at 02:18
အဲဒီထဲက "တော်ဝင်" က မအေးနဲ့ခင်ပွန်း ကတော့ နအဖအောက်ဆွဲအဖြစ် ခေတ်အဆက်ဆက်ကထင်ရှားခဲ့သူတွေပါ။
အဲဒီ "မအေး" ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ YIT ကျောင်းသူဟောင်းပါတဲ့။
နောက်ဆုံးပေါ် စင်ကာပူက ခေတ်သစ်အောက်ဆွဲ မိသားစုကတော့.. YIT Chemical Department ကဆရာဟောင်း ဦးတင်လင်း ၊ သူ့ဇနီးနဲ့ သူ့သမီး အင်ကြင်းတို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးစကားဆို ဖုန်းပေါ်ကနေတောင်မပြောရဲတဲ့ ဒီမိသားစုရဲ့ နအဖဘက်မှာ ပြတ်ပြတ်သားသားရပ်ရဲတဲ့ သတ္တိကို အထူးရွံရှာမိပါတယ်။
နိုင်ငံရေးဒီရေတက်စဉ်အခါတုန်းကတော့ ဒီမိသားစု အနီရောင်တွေဝတ်ပြီး တိုပါးရိုးကျောင်းမှာ နေရာဝင်ယူနေတာကိုမြင်ဖူးပါသဗျိုး..။
ဒီလိုစုန်းပြူးတွေကို မွေးထုတ်ပေးရတာ/ပတ်သက်ရတာ YITကျောင်းနာပါသည်။ဒီလို ဆိတ်ဟိုဒင်းတွေကို စင်ကာပူရောက်မြန်မာတွေပြတ်ပြတ်သာားးဆန့်ကျင်ကြပါစို့။
thanks Ko-Htike and to Goldie for the translation...
now we the readers must pass the link onto the other blogs... that is at least we can do, show the pretty pictures around ... do we? :) oh musn't forget the link to the translation as well... :)
This is working well and I love it... now let's repeat the slogan...
The time has come for everyone who is connected to Burma, to makeaclear choice. Which side do you belong to? Pro-Junta or Pro-Democracy?
Thank you very much and good job to you Mr. Htike for posting the pictures of the traitors (maggots) and supporters of the SPDC. These people who went to that SPDC party should be ashamed of themselves. Just like Phone said, they should be ashamed of themselves by celebrating Burma's Independent Day w/o pictures of Boo Gyote Aung San.
when these shameless people were singing and dancing and stuffing their disgusting faces, couldn't they hear the voices of our venerable monks chanting metta through the pouring rain? couldn't these shameless people feel the clubs beating our venerable monks and our fellow myanmar citizens? and couldn't these shameless people feel the blood dripping from our venerable monks and our fellow myanmar citizens as they took their last breath?... these shameless people kept singing, dancing and force feeding their asses...
3 January 2008 at 07:28
3 January 2008 at 07:31
တချို.ကြတော.လဲ ဖေါ်လန်ဖါးချင်လို.။
တချိူ.ကြတော.လည်း အဲလိုလေး အကျန်စား၇
ဓါတ်င်္ပု ကို သေခြာ သတိထားကြည်.ကြပါ၊ အချောင်သမား များ၇ဲ.မျက်နှာစိုး၇ွင်္.နေပြီး အစားအသောက်ဘဲ စိတ်ဝင်စားနေတဲ.င်္ပုပါ။။
ဒေါ်သန်းသန်းနု ဘေးက ၀က်မ ကြီးက Mynamar Travel ကမအေးဆိုတာပေါ.။
အဲလို အချောင် သမားတွေ၇ှိနေလို.လဲ နအဖ က ဒီနေ.အထိ ခွေးစိတ်ဝင်နိူင်တာ။
အဲဒီတော. တာဝန်သိတဲ.သူများ က အဲဒီ အချောင်သမား၊ နအဖ ဒေါက်တိုင် ၇ဲ.ဆိုင်များ ကိုသပိတ်မှောက်ကြပါ။
နအဖ င်္သ၇ုင်္း ကို မတ၇ား ဆက်ကြေးမပေးေ၇း ကန်ပိန်း စပြီဆိုတာလည်း မမေ.ကြပါနဲ.။
I would like remention the slogan of Jeg,
Pro-Junta or Pro-Democracy?
These people are educated but they are the slaves of the military dogs.They love to eat leftover bones of the military dogs.
As Kyaw mentioned above, SPDC and their associates are military dogs or in Burmese "Sitt Khway". Ambassador U Win Myint is the biggest sitt khway in singapore. Thanks again Ko Htike for putting pictures with their names & keep up the good work:-)
Happy (or sad) Independent Day
4 January 2008 at 05:52
ကျွန်တော်တို့ ပြတ်ပြတ်သားသားစည်းခွဲကြ ရင်မကောင်းဘူးလား၊ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးတွင်သော်
၄င်း၊ ပြည်တွင်းသော်၎င်း ရှေ့လျှောက်မှာမတတ်သာလို့ ၊မကောင်းတတ်လို့ ၊ကိုယ်ကလည်းဗမာဖြစ်နေလို့ ၊အဖေ။အမေနဲ့ သိနေလို့ ၊ဘာလို့ ၊ညာလို ၊လိုပေါင်းများစွာကို့ ဆိုသောအကြောင်းတွေခြင်းထပ်ပြီး
ထိုသို့ သောအပြောကို ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကလည်း
မပြောကြမိဖို့ နဲ့ ၊၄င်းတို့ မှပြောလာခဲ့ ကြရင်လည်း
သဘောမတူသောအကြောင်းရာကို ရဲရဲဝံ၀ံနှင့် ကိုယ်ကိုတိုင်လုပ်ကိုင်ရဲသော၊ကျင့်သုံးခြင်းနှင့်
အကြောက်တရားကိုကင်းဝေးပြီး။ရဲရဲရင့်ရင့် အမှန်တရားကို ရင်ဆိုင်ရကြသောသူတွေရဲအောင်ပွဲကို
မကြာသောကာလမှာ၊ငါတို့ရဲ့ အောင်လံတွေကို ဗမာပြည်ရဲ့ တနံတလျှားပြန်စိုက်ကြမယ်ဟေ့။
( Lets Work Togethers)
There will be no excuses for attending junta's function. These people (mostly from Myanmar Club in Singapore)always say they are neutral and not interested in politic. Now they are willing to dance with bloody junta's tune. Now we all know who they are and which side they are on. Please beware these shameless people in Singapore!!!!
4 January 2008 at 06:30
Tks for ur pictures ko htike,
They are celebrating with our tax money,which everybody don't wanna to pay in singapore.(ma tha htar yae sar tway sar nay kya tar)
Their revenues are few million $$.(no one know exactly,bcoz no record)
NOBODY KNOW WHERE THESE MONEY GONE????????????????
We all know that Myanmar government is ruthless to its own people.
But I have sad to read the comments in your blog and I find out that people who post their comments are no better than pople who beat up monks.
People should understand that Military Government want to rule country by dividing between all the general public.
They want to create hatred among people.
They can rule the country for so long not because of so-call their supporters. It is because of ordinary citizines who do not know their tatics. They can rule the country so long because of people who just shout and curse and blame others. (I dont find them any better than swan arr shin of military government.)
Why cant we show our view in the way like gentelman. Do you know why we deserve Military Government. Becaues we do have people like you, not because of people like what you called goat fighting-balls.
If we want our country to be better we should behave ourself as better people. This is the only way we can change our country.
response to kyaw zwar
do you think the venerable monks were rude when they chant metta peacefully and got clubbed and killed by the soldiers and their thugs? and do you actually think that by being nice and polite to junta they'll change for the better? they killed monks and innocent citizens and they don't even giveafcuk to UN. be realistic. do YOU know which side you are on?
အခုလို စလုံး သံရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့ လွပ်လပ်ရေးပွဲ ပုံတွေ နဲ့ ပါတ်သက်လို့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အရင်ပြောပါရစေ။ သူတို့ တစ်တွေ လူတွေ အားလုံး က တားမြစ်နေတဲ့ ကြားက သွားရောက် အသုံးတော်ခံ လုပ်တဲ့ အတွက် ကိုယ်အပြစ် ကိုယ်ခံ လို့ ပဲ ဆိုရမှာပါ။
ဒါပေမယ့် အခုဓါတ်ပုံတွေ ထဲမှာ EX-RIT လို့ ရေးထားတာ ကိုတွေ့ ရပါတယ်။ စလုံး မှာ EX-RIT လို့ ဆိုလိုက် ရင် EX-RIT Singapore အဖွဲ့ ကို ပြောတယ်ဆိုတာ သိကြပါတယ်။ အခု လက်ရှိ အဖွဲ့ထဲမှာ ဓါတ်ပုံထဲ က သူတွေ တစ်ယောက်မှ မပါ ပါဘူး။ သူတို့ တစ်တွေ အရင်တုန်းက အဖွဲ့ထဲမှာ ပါဘူးပါတယ်။ အခု မဟုတ်တော့ ပါဘူး။ EX-RIT အဖွဲ့ အနေ နဲ့ ဒိလို နအဖ လုပ်ရပ်များနဲ့ နအဖ သံရုံး များ ကိုလဲ ရွံ့ ရှာပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဓါတ်ပဲု ထဲမှာ ပါတဲ့ EX-RIT ဆိုတာကို ဖျက်ပေးပါ လို့ တောင်းပန်ပါတယ်။
Hey, look at the number of people attending the pro-junta's ceremony. They hadalarge hall prepared foragrand ceremony, but the hall looked pretty much empty! So the junta must have learned there were onlyahandful of people on their side considering the size of Burmese population in singapore. Shame on you, junta!
Just realized that only "Yoke Soe" and "Pote Toe" families are participates in 60th Independences day events which organizes by Burma Embassy in Singapore.
Seems like if u give them 1 free lunch, you can do whatever and you can “&%@#” them as well.
6 January 2008 at 12:01
I heard on RFA that the singapore police had questioned Burmese activists who took pictures of the attendees to the SPDC party. I hope the SG govt dont deport them back to Burma.
7 January 2008 at 02:41
အစစ်ဆေးခံရတဲ့ လူငယ်တြေေူပာတာကတောူ့မန်မာသံရုံးက စကဿာပူရဲကို တိုင်ုကားလိုက်တာေုကာင့် အခုလို အစစ်အဆေးခံရတာူဖစ်တယ်လိုႚေူပာပၝတယ်။
ဇန်နဝၝရီလ ၄ရက်နေႚ ညနေပိုင်းက လတ်ြလပ်ရေးနေႚ အခမ်းအနားကဵင်းပတဲ့ မရီနာ မန်ဒရင်း ဟော်တယ်ရြေႚမြာ အမဵြိးသမီး တဦးအပၝအဝင်ူမန်မာလူငယ်၆ဦးက မိနစ်၃၀ုကာအောင် ဓၝတ်ပုံရိုက်ခဲု့ကတာူဖစ်ပၝတယ်။
အခမ်းအနားကဵင်းပတဲ့ ဟိုတယ်ရြေႚကို သြားရောက်ခဲ့သူတေထြဲမြာ ပၝဝင်တဲ့ ကိုဝင်းကေဵာ်က မိမိတိုႚ ၆ဦးကို စကဿာပူရဲတပ်က မတ်ြပုံတင်စစ်ဆေးမူတေလြုပ်တာေုကာင့် မိမိတိုႚဟာ စကဿာပိူိုံင်ငံကူပဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေတေကြို ခဵြိးဖေၝက်ူခင်းမရြိေုကာင်း ရငြ်ူးပခဲ့ပေမဲ့ မတ်ြပုံတင်တြေ သိမ်းသြား္ဘပီး ရဲစခန်းကို လာမဲ့ အဂဿၝနေႚ ဇန်နဝၝရီလ ၈ရက်နေႚမြာ လာရောက်ဖိုႚ ခဵိန်းဆိုခဲ့တယ်လိုႚေူပာူပပၝတယ်။
စကဿာပိူိုံင်ငံမြိာံစ်ြစဉ်ကဵင်းပူမဲူဖစ်တဲူ့မန်မာသံရုံးရဲႚ ဧည့်ခံပြဲမြာ အရင်ိံစ်ြတေကြ စကဿာပူရောက်ူမန်မာတြေ စည်းစည်းလုံးလုံး တက်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့ အခိုံစ်ြမြာတော့ လူ၁၀၀လောက်ပဲ တက်ရောက်ေုကာင်း၊ အထူးသူဖင့် စကဿာပိူိုံင်ငံရြိ ပင်နီစူလာပလာဇာက သံရုံးနဲႚနီးစပ်တဲ့ ကုန်သည်တခဵြိႚပဲ တက်ရောက်တာူဖစ်ပၝတယ်။ ဒီလိုဖစ်ရူခင်းဟာ အခမ်းအနားကို မတက်ရောက်ဖိုႚ စကဿာပူရောက်ူမန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လပ်ြရြားသူတေကြလည်ြးိံးဆော်ထားတာေုကာင့်လည်ူးဖစ်ပၝတယ်။ အရင်ိံစ်ြတေကြ ဧည်ခံပြဲမြာဖေဵာ်ေူဖတဲ့ စကဿာပူရောက်ူမန်မာကေဵာင်းသားမဵား အဖြဲႚရဲႚအ္ဘငိမ့်ပြဲလည်း အခိုံစ်ြမြာ ကူပူခင်းမရြိဘူးလိုႚ သိရပၝတယ်။
Nyi Nyi Than and 88-student,After reading you guys comments,I can't stop laughing.Har Har.
thanks for ur pictures.
but i want to know why u do like that?
and then u also give tex money to myanmar embrasssy.if u r too brave, u don't give money and u kill Than Shwe like suiside mothad.
after that all the government head died, i really believe u tha u r the really Myo Chit person.
don't fight on the media.
don't u and give people to wrong message.
actually i want to know that u r really Htay Ra Va Da buddhist. if u do follow by the old way, i can tell u never win, and all the people going to do not believe u.
i m really Htay Ra Va Da buddhist.
To, Thidar Myint and Wint Wah Kyaw
It was very shameful and surprised to see those pictures that you re entertainting in Mad Dog juta dinner.Whatever You are talking about pro democracy loudly in the public thats not came from your heat, just from your mouth. Are you looking for advantages or hoping for something from mad dogs? Finally I knew who you are. People labble yours as trators, that suit for yours. Should better stay away.
18 February 2008 at 03:36